दुई वर्षमै किन खोसियो आदिकवि भानुभक्तको जागिर ? - Tara Khabar
भानुभक्तले युवावस्थाको उत्तरार्धमा जागिर खाए, तर जागिरमा उनी धेरै टिक्न सकेनन् । मोतीरामले यिनको जागिरका प्रसङ्गमा लेखे, ‘कवि भानुभक्त आचार्यजी स्वस्तिश्रीमद्राजकुमारात्मज श्री ३ कम्याण्डर–इन–चीफ् जनरल कृष्णबहादुर राणाको चाकरी गर्दथे र विक्रमीय संवत् १९०७ सालका वैशाख मासमा मदेसको जागीर पाई गये तर भानुभक्त कवि ऐ १९०९ मा खोस्सिये र कागत्पत्र बुझाउन भनी नेपाल् कुमारी चोकमा आई कागतपत्र आफूले २ वर्ष काम् गरेको खर्चा आम्दानी समेत्को स्याह बुझाउँदा केही बाँकी सर्कारिया लागेछ र ५ मैन्हासम्म कुमारीचोकमा थुनिएछन् ।’
भानुभक्त आचार्य (विसं. १८७१/३/२९ – १९२५/६/६)को जागिरका बारे बाबुराम आचार्यले ‘पुराना कवि र कविता’मा अरू विस्तारसहित लेखेका छन् । भानुभक्त १९०२ सालभन्दा अगावैदेखि मेजर पदमा जागिर खाएको बेहोरा पनि नेपाली साहित्यको इतिहासमा उल्लेख भएको छ । तर, मोतीरामपछि उनका छोरा रमानाथ र नातिनी विष्णुमायाले भानुभक्तले जागिर खाए या खाएनन् भन्ने प्रसङ्ग निकालेको देखिँदैन । बाबुराम आचार्यले चाहिँ भानुभक्त पाल्पाकै पल्टनमा गोस्वारा दफ्तरमा पाल्पा मधेस खस्यौली जागिरमा रही खरदार पदसम्म पुगेको विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
भानुभक्तद्वारा रचित ‘जागिर् छैन’ भन्ने यस कवितालाई नै उल्टोपाल्टो व्याख्या गरेर भानुभक्तले जागिर खाएका थिएनन् भनिएको पाइन्छ । चाकरीबाट खुसी भई पाएको मान खोसिई कुमारीचोकमा थुनिनु पर्दा मानमाथि कहिल्यै नखोसिने भुक्तमान थपियो भन्ने भानुभक्तको गुनासो ठीकसँग यो कविता पढ्दा बुझिन्छ नै ! बाबुराम आचार्यले यस कविताको प्रसङ्गमा लेखेका नै छन्, ‘हुन त यी (भानुभक्त) गरिब थिएनन् । तैपनि आफ्ना आश्रयदाता जनरल कृष्णबहादुर राणासँग खर्चबर्च र बिदा माग्नु एक तरहको नियमै थियो ।’
भानुभक्तले त ‘जागिर् छैन धनी म छैन घरको केवल कुदालो खनी’ भनेर कमान्डर इन चिफ कृष्णबहादुर राणामा जाहेर गरेका कविता लेखेका हुन् । जागिर खोसिएपछि जागिर छैन भनेर मनको डाहा पोख्न उनले घुक्र्याइ र व्यङ्ग्यका रूपमा यो कविता लेखेको हुनुपर्छ । उनी एउटा सम्पन्न ब्राम्हण परिवारका व्यक्ति थिए । तत्कालीन समयमा धनी, पुरेत या पण्डितले उति कोदालो खन्नै पनि पर्दैनथ्यो । उनले बेलाबखत कोदालो खने पनि होलान् । त्यस बखतको नेपालमा भानुभक्तजस्ता पढेलेखेका धनी पण्डितहरूले जीवन निर्वाहका लागि भने कुटोकोदालो खन्नुपर्दैनथ्यो र कोदालै खनेर आफ्नो जीविका गर्नुपर्दैनथ्यो । फेरि उनी खरदार बाबुका एक मात्र भूमिसम्पन्न छोरा पनि थिए ।
यसै प्रसङ्गमा भानुभक्तका पनाति मुक्तिनाथ आचार्य (भानु पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्ष)ले समेत ‘कवि भानुभक्त आचार्यले जागिर खाएका थिएनन्’ भनेर लेखेका छन् । राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यका विषयमा अझै वंशज र बाजेपट्टिबाट छुट्टिएका सातपुस्ते सन्तान नै हावी हुनुलाई न्यायोचित मानिँदैन भन्ने अनेकौँ बुद्धिजीवीहरूको मत रहेको छ । तर, अपवाद रूपमा भानुभक्तका माहिला काका काशीनाथतर्फका शाखासन्तति प्रा.डा. शर्वराज आचार्यले भने भानुभक्तीय खोजमा भानुभक्तले जागिर खाएको मानेको पाइयो । वास्तवमा भानुभक्त आचार्य भन्नु कुनै व्यक्ति, वंश, क्षेत्र या भूगोलका मात्र पेवा होइनन्, यी त सिङ्गो नेपाली भाषाका आदिकवि हुन्, मुकुट हुन् ।
भानुभक्त कुमारीचोकका निगरानीमा पर्दा उनी दिनभरि डुल्न पनि पाउँथे । घरतिर चिठीपत्र र रामायणका श्लोकहरू जेजति पनि लेख्न पाउँथे । यति हो, उनी राती सुत्न कुमारीचोक आउँनुपर्थ्यो । बाबुराम आचार्यका अनुसार भानुभक्तको ‘यो थुनाइ मामुली थियो । यहीँ (कुमारीचोकमा) बिरामी हुँदा छुटेर काठमाडौँको आफ्ना डेरैमा गएर बसे ।’
‘जब यो व्रतबन्धको कुरो राखी कवि भानुभक्ताचार्यले विन्तीपत्र चढाए सर्कारले खुसी भै निज कवि भानुभक्तलाई कुमारीचोक्बाट फारग् पत्र दिंदामा तुरन्त सम्वत् १९०९ विक्रमीयका फागुन मैह्नामा घर गै आफ्ना पुत्र रमानाथको व्रतबन्ध गरे । फेरि विक्रमीय सम्वत् १९१० मा नेपाल आये र बाकी रहेको युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्डको पनि तर्जुमा भयो र यो रामायण ग्रन्थ पूरा भयो ।’